Sida loo dhageysto muusikada saacadaha casriga ah (Android, Apple iyo kuwa kale) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Sida loo dhageysto muusikada saacadaha casriga ah (Android, Apple iyo kuwa kale)
Markaad go'aansaneysid inaad iibsato smartwatch, waa inaad sidoo kale qiimeysaa shaqeynta marka loo eego muusikada loo maqlayo- Ma waxay u shaqeyn doontaa oo keliya nooc ka mid ah kontoroolka fog ee taleefankaaga casriga ah ama dhab ahaantii awood ayey u yeelan doontaa qulqulka muusikada oo iskudhafan heesaha si aad uga dhagaysan karto iyaga meelkasta?
Iyadoo taas leh codsiyo badan oo muusig oo badan iyo barnaamijyada socodka ee suuqa laga heli karo, jawaabta su'aashani waxay noqon kartaa mid ka fudud sidaad moodeysid, khaasatan maxaa yeelay macquul maahan in lagu shaqeeyo adeegga muusikada la doortay ee qalabka lagu rakibay smartwatch. Waxaan ku arki doonnaa, waxyaabo kale, tuducyada soo socda in, dhab ahaan, taageerada ugu fiican ee loo maqli karo muusigga offline uusan ka imaanayn saacadaha casriga ah ee ay soo saareen Apple iyo Google.
Halkan waxaa ah wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u ogaato kartida saacadaha casriga ah si ay muusikada uga ciyaaraan taleefankaaga iyo madax-bannaanidaba.
AKHRISO: Saacadaha ugu fiican: Android, Apple iyo kuwa kale
Sida hogaamiye suuq sidoo kale smartwatches, layaab malahan inDaawada Apple U fidiso isticmaalaha fursadaha ugu badan ee dhageysiga muusikada iyo noocyada kale ee codka; Muusikada Apple Xaqiiqdii, waa doorashada ugu cadcad: barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakameyso muusikada lagu ciyaaro taleefankaaga si toos ah curcurkaaga, ama aad toos uguhesho heesaha tooska ah ee Apple Watch adoo ka dhageysanaya samaacadaha dhagaha. Bluetooth.
Adoo iska diiwaangelinaya Apple Music, waad sii deyn kartaa hees kasta oo ku jirta buugga ama maqal wax walboo elektiroonig ahaan lagu iibsaday laguna soo dhoofiyay smartwatch.
Haddii adeegyadu ay la jaan qaadayaan saacadda la doortay, raadadka muusigga toos ayaa loogu sii dayn karaa Apple Watch adoo maraya Wifi O LTE; Sidoo kale, haddii aad ka fog tahay qadka internetka oo aad rabto inaad ka tagto taleefankaaga guriga, waxaad u waafajin kartaa heesaha ku jira Apple Watch ka hor adoo tagaya My watch xaadir ku ah barnaamijka Apple Watch ee casrigaaga, ka dib Muusikada mi Kudar miyuusigga. Iswaafajintu waxay shaqeyn doontaa oo keliya intaDaawada Apple ayaa mas'uul ka ah.
sidoo kale Spotify wuxuu leeyahay barnaamij u heellanDaawada Apple kaas oo loo isticmaali karo in si toos ah loogu sii daayo raadadka muusikada curcurkaaga ama lagu xakameeyo dib u ciyaarista qalab kale. Waxaa intaa sii dheer, mahadsanidiin cusbooneysiin dhow, hadda waxay sidoo kale ka shaqeysaa aaladaha moobaylka iyo Wi-Fi, oo kuu oggolaanaya inaad dibadda u baxdo la'aanteed taleefankaaga.
Si kastaba ha noqotee, isha xiriirinta xogta saacad ayaa loo baahan yahay welina waa wax aan macquul aheyn in lagu dhejiyo liistada liistada iyo saacadda dhageysiga qad la'aanta.
Kadib waxaa jira barnaamij, Youtube music, oo loogu talagalay Apple Watch, laakiin kaliya loo isticmaalay in lagu baaro maktabadaada muusikada iyo xakameynta dib u soo celinta qalabka kale. Hawlo isku mid ah ayaa laga heli karaa barnaamijka Deezer waxaa qoray Apple Watc.
Nidaamka hawlgalka ee Google Wear
Barmaamijka smartwatch ee Google wali ma aadan hirgalin taageero isku xirnaan buuxda Youtube music in, iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in Google Play Music waa laga saaray, waa wax aad loola yaabo. Si kastaba ha noqotee, waa suurtagal in la isticmaalo Adeegso OS si loo xakameeyo howlaha aasaasiga ah ee Youtube music casrigaaga.
Waxyaabaha kor ku xusan waxay khuseeyaan ku dhowaad dhammaan adeegyada muusikada - ma jiro barnaamij Adeegso OS u heellan adeegyada la bixiyo, tusaale ahaan, Apple Watch, sidaa darteed ma jiro iswaafajin liiska shaqeynta.
Koontaroolada loo maqli ka muuqan doonaa on your smartwatch mar kasta oo qalabka Android wuxuu ka ciyaaraa waxyaabo badan oo kala duwan barnaamijka iyo barnaamijka Podcast-ka, laakiin wixii ka dambeeya bilaabida iyo joojinta loo maqli karo, wax badan lama qaban karo walina waxay noqon doontaa lagama maarmaan in markasta la qaato taleefankaaga casriga ah.
Adeegga muusikada kaliya ee leh barnaamij la jaan qaadi kara Adeegso OS es Spotify In kasta oo aysan bixinayn astaamo badan oo aan ahayn waxa aad ka hesho dhexgalka caadiga ah Android con Adeegso OS: Waxaad kudarsan kartaa heesaha maktabadaada muusikada saacadaada oo aad u kala wareegi kartaa aaladaha loo maqli karo, laakiin toos uma daawan kartid muusikada saacadaada, kumana kicin kartid raadadka dhageysiga qad la'aanta.
Si aad ugu heeso heeso saacad caqli badan Adeegso OS iyada oo aan sidoo kale u baahnayn taleefan, kaIkhtiyaar fiican waa dalabka NavMusic kaas oo bixiya a muddo tijaabo oo bilaash ah ka dib markaad bixiso: waa codsi yar oo ku saleysan wareejinta faylasha maxaliga ah ee saacaddaada, sidaasna ku helaya muusikada la rabo qaab dijitaal ah.
Fitbit, Samsung iyo Garmin
Baarka kasta oo ka mid ah Fitbit su Aayadda Lite wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakameyso muusikada markaad ku ciyaarayso taleefanka casriga ah ee ku xiran, iyada oo loo marayo codsi kasta dooro inaad isticmaasho. On saacadaha marka laga reebo Versa Lite iyo dareenka cusub iyo Versa 3, oo ku jihaysan adeegyada daruuriga ah, waad iswaafajin kartaa raadadka dhijitaalka ah ee laga helay qalabkaaga adoo adeegsanaya arjiga Fitbit Ku Xidhnow.
Sidoo kale kiiskan Spotify u huriyaa codsi gaar ah saacadaha casriga ah Fitbit, laakiin markale waxay kaliya kuu ogolaaneysaa inaad xakamayso loo maqli karo aaladaha kale: runti, suurta gal maaha inaad iskuxidho liistada iyo saacada. Codsiyada kuu oggolaanaya inaad tan ku samayso, qalab kasta. marka laga reebo Versa Lite, Aniga Deezer mi Pandora. Doonaya, sidaas darteed, inaad dhageysato muusiggiisa gudaha Fitbit Adigoon taleefankaaga gacanta ku hayn, waa inaad isticmaashaa mid ka mid ah adeegyadan soo dejinta ama nuqul faylasha muusikada dijitaalka ah, sida kor lagu sharaxay.
Ku saabsan taxanaha Samsung Galaxy Watch, bilaabida arjiga Muusikada Ogsoonow inay suurtagal tahay in laga beddelo xakamaynta muusigga muusikada ee taleefanka loona beddelo kan saacadda laftiisa: si aad uga dhegeysato muusikada qadka, waxaad isku dhejin kartaa raadadka dhijitaalka ah ee saacadda casriga ah ama aad dhaqaajiso barnaamijka Spotify heegan ah oo ku jira Prima wuxuu kuu ogolaanayaa inaad iskudirto liiskaaga saacadaha casriga ah.
Ugu dambeyntii, saacadaha ballaaran ee saacadaha casriga ah Garmin waxay leedahay xulashooyin muusig oo la mid ah kuwa Samsung: Waxaad u isticmaali kartaa saacadahan inaad ku xakameyso dib u soo celinta barnaamijyada miyuusigga badankood taleefankaaga ama aad ku dhex garaacdo muusikada dijitaalka ah ee isku xiran Garmin Connect, kuu ogolaanaya inaad taleefankaaga kaga tagto guriga.
Adeegga muusikada kaliya ee la jaanqaadaya codsi hooyo oo isla dharka la gashan karo ayaa ah Spotify iyo, sida qalabka Samsung, macaamiisha Spotify Premium waxay ku dhejin karaan liistada liiska aaladda Garmin si ay u dhagaystaan ​​meel kasta.
AKHRISO: Waa kuwee smartwatch si aad u iibsato 2021
Sida loo qaabeeyo Gmail qalabka ugu fiican
Sida loo dhagaysto muusikada bilaashka ah Kaaliyaha Google iyo Nest
Sida loo daaro cinwaanada hoose ee TV-ga
Sida lacag looga qaato taleefankaaga xeedho la'aan
Sida loogu xiriiriyo Alexa nalalka
Sidee TV-ga looga saaraa qaabka sugitaanka
Abuurista muusig cusub oo leh caqli macmal ah
The barnaamijyadooda gaare slideshow ugu fiican ee Android iyo iPhone
Noocyada ugu wanaagsan ee Android 11 - Sida Loogu Helo Taleefan Kasta
Shirkadee mobiilkee baa leh Internetka ugu dhaqsaha badan 4G LTE?
Sida loo dejiyo biraawsarka asalka ah ee iPhone
Sida loo daawado Mediaset Play ee TV-ga
Telefoonada rooga ugu fiican, telefoonada aan la burburin karin: kuwooda la doorto
Sida loo isticmaalo Lens-ka Google on Android iyo iPhone / iPad
OLED ama QLED: waa maxay tiknoolajiyadda ugufiican TV-yada cusub?